AKHRISO:-Xisbiga Amniga iyo Cadaalada oo War ka soo Saaray Shirkii Shidaalka ee London, | Saadaal Media
Xisbiga Amniga & Cadaalada wuxuu walwal xoogan ka qabaa shir ay soo qabanqaabisey xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Shirkada Spectrum oo 07 bisha 2aad 2019 lagu qabtey magaalada London, kaa soo lagu beecinayey xirmooyin 50 (Blocks) oo shidaalka Soomaaliya ka mid ah oo ku teetsan dhul baxaadiisu tahay, 173 kun oo km.
Xaraashka (Auction) xirmooyinka shidaalka ayaa la qabtey iyadoon hal qodob laga laga fulin heshiiskii ay 05 bishii 6aad 2018 magaalada Baydhabo ku gaareen Dawlada dhexe iyo dawlad Goboleedyada. Heshiiska Lahaanshaha maamulka iyo wadaaga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka (Shidaalka iyo Macdanta) ayaa dhigaya:-
1) In sharciga Shidaalka iyo Macdanta laga ansixiyo labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka.
Xsidoo kale xisbugu wuxuu soo dhoweynayaa dibadbaxyadii kadhacey london kaas oo looga soo horjeedey xaraashka hantida soomaaliyeed .
Ugu danbeen xisbiga AMNI IYO CADAALAD wuxuu soo dhoweynayaa wadahadalada IGAD ay ku dooneyso sii deynta Sheekh Mukhtaar Roobow oo xiran dowlada Federaalka Soomaaliya.